न एम्बुलेन्स न डाक्टर, विरामीकाे छटपटाएरै मृत्यु - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
न एम्बुलेन्स न डाक्टर, विरामीकाे छटपटाएरै मृत्यु
प्रहरी कमलपोखरीमै रहेका ती व्यक्तिको घरमा पुग्यो । बिरामी छट्पटाइरहेका थिए । प्रहरीलाई आदेश छ, सम्भावित संक्रमित व्यक्तिको नजिकमा नजानु, पिपिईधारी स्वास्थ्यकर्मी वा एम्बुलेन्सको सम्पर्कमा गएर नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनु ।
यतिञ्जेलमा बिहानको करिब १ बजिसकेको थियो । कमलपोखरीका एकजना इन्स्पेक्टर आफैँ दौडधुप गर्दै थिए । उनले एम्बुलेन्स खोजे । कतै पाएनन् । पिपिईधारी स्वास्थ्यकर्मी भेटिनु त टाढाको कुरा भयो । बिरामीको छट्पटाहट बढी रहेको थियो । पानी पिउन चाहे, तर नजिक पर्नै नहुने कारण पानी कसले दियोस् ?
सरकार कोरोना संक्रमण फैलन नदिन र फैलिएका व्यक्तिको उद्धारका लागि उच्च सतर्कतासहित सक्रिय छ कि छैन भन्ने कुरालाई यो घटनाले प्रष्ट पार्दैन र ?
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बुधवार, वैशाख ३ २०७७ १८:४४:२८